Fifanatonana politika avo lenta: misy miketrika paika maloto hanemorana ny fifidianana | NewsMada
Fifanatonana politika avo lenta: misy miketrika paika maloto hanemorana ny fifidianana
Manomboka voizina amin’izao fotoana izao ary efa nifampiketrehan’ireo mpanao politika vitsivitsy, miaraka amin’ny olon’ny fitondrana ny hanemorana ny fifidianana filoham-pirenena. Manao paika maloto tsotra izao izy ireo ary ahina hitondra any amin’ny korontana izany.
Fihetsiketsehana ivelany ihany ny an’ny kandidà Rajaonarimampianina amin’ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana, saingy mitady ny paikady rehetra hanemorana ny fifidianana ny fitondrana, amin’izao fotoana izao. Miray lalana amin’izany ny HFI tarihin-dRakotoniaina Pety amin’ny fitakiana ny tsy tokony hanaovana fifidianana aloha. Ao ambadik’izy ireo koa anefa ny ekipan’ny fitondrana. Mivoy izany koa ireo haino aman-jery mpanohana azy ireo mba hahatongavana amin’ny tanjona, tsy hisian’ny fifidianana amin’ny 7 novambra izao.
Tsy mandeha ho azy koa ireo kandida miisa 10 nailiky ny HCC satria tsy nahafeno fepetra ary nametraka fitarainana teny Ambohidahy, afakomaly. Mazava anefa fa tsy nandoa ilay anto-bola 50 tapitrisa Ar izy ireo. Eo koa ny tsy fahampian’ny antontan-taratasy filatsahana. Midika ho tsy fahavonona sy tsy fahamatorana avokoa izany satria efa niandry fotoana farany izy ireo vao nanatitra ny dosie-ny. Mizotra ho any amin’ny fitakina ny hanemorana ny fifidianana koa ireto kandidà voailika ireto.
Miketrika miaraka amin’i “Deba”
Manampy ireo, miketrika ao anatin’izany rehetra izany koa ny amiraly Ratsiraka. Namory ny sasany amin’ireo kandidà ireo teny an-tranony teny Faravohitra, omaly ka misy enina amin’ireo kandidà efa hilatsaka, miray feo amin’ny hitakina ny hanemorana ny fifidianana. Tafakatra 16 izany izy ireo, izao : 10 ireo kandidà voalika ary enina hafa fanampiny ka anisany ny kandidàn’ny Kintana, Tabera Randriamanantsoa. Efa tafapetraka eny amin’ny filankevi-panjakana koa, omaly ny fitakiana ny tsy tokony hanaovana ny fifidianana.
Etsy andaniny, mety amin’ny kandidà Rajaonarimampianina izany stratejia rehetra izany satria mihemotra indray ny fotoana tokony hametrahany fialana raha tokony ho amin’ny 7 septambra izao izany.
Mazava izany izao fa misy miketrika fikorontanana eto amin’ny firenena ary anisan’izany na ireo efa kandidà ara-dalàna aza. Mahagaga anefa fa sady kandidà izy ireo nefa mikaon-doha amin’ny tsy hahatanteraka ny fifidianana.
Hitondra antsika any amin’ny tsy tan-dalàna…
Tsy vitan’izany fa mitondra antsika ho any amin’ny tsy fanajana ny tany tan-dalàna izany fanemorana ny fifidianana izany. Hitondra krizy goavana indray eto amin’ny firenena : ny sosialy sy ny toekarena. Efa efa-taona anefa ny niandrasan’ny vahoaka izao fifidianana izao noho ny fahantrana lalina niainana teto amin’ny firenena sy ny olana samihafa nandritra ny fitondrana Rajaonarimampianina.
Araka izany, tokony hirosoana amin’ny fe-potoana voalazan’ny lalàna ny fifidianana ary harahina avokoa ireo fepetra samihafa mifandraika amin’izany. Anisany ny fametraham-pialan’ny filoha amin’ny herinandro… Mba hilaminan’ny firenena sy ny vahoaka.